? Fav Trans ? - KhonNaSinKyal - Wattpad
? Fav Trans ?
#kimnamjoon #myanmar #jeonjungkook #junghoseok #parkjimin
Two Moons မြန်မာပြန် (Season II)
Season II ကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ fujoshi/fudanshi များအတွက် Chinese translation ကနေ တစ်ဆင့် ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ZMMရဲ့ ပထမဆုံး translation project ဖြစ်လို့ ဝေဖန်အကြံပြုပေးစေလိုပါတယ်?
မုန့်ဖုတ်သမားလေး ကျွန်တော့်ချစ်သူ (Baked Love)(Myanmar Translation)
40.8K 5.5K 21
Chip Honeycutt မှာမိန်းကလေးဆန်တဲ့နာမည်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒါက ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကကိစ္စက သူ့မိသားစုဟာမုန်တိုက်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားတာပါပဲ။ ပြီးတော့ သူကမုန့်ဖုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်း ချစ်သေးတယ်လေ။ ဒီလိုအချိန် လူသစ်တယောက် ရောက်လာတယ်။ ဒီလူသစ်က သူမသိစေချင်တဲ့ကိစ္စကို သိသွားတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။ သူက လူတွေကို ပြေ...
A Round Trip To Love(Myanmar Translation)
434K 38.6K 109
A Round Trip To Love ဝတ္ထုကို တရုတ်ဘာသာကနေEnglishဘာသာကိုပြန်ပေးထားတာကို ဘာသာပြန်ပြီးတင်ပေးတာပါ ပထမဆုံး ဘာသာပြန်တာမို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ် ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမယ် တရုတ်ကနေEnglish Englishကနေမြန်မာလိုဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ရတာမို့ တစ်ချို့နေရာမယ်လွဲနေတာလေးတွေရှိနေပါလိ်မ့်မယ် သည်းခံပြီးဖတ်ရှုပေးကြပါလို့ မူရင်းEnglish story...
My IDOL OPPA
22.8K 2.8K 16
နောက်ထပ် Webtoon Translation တပုဒ်ပါ။ မူရင်းနာမည်က 우리오빠는 아이돌 ပာ စာရေးသူနာမည်က 성은ပါ.... ဒီWebtoon လေးထဲမှာဆိုရင်တော့ Idol တယောက်ကို နှစ်အကြာကြီး သဘောကျလာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ Idol နဲ့ နီးစပ်ချင်လို့ သူထောင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ..... Romance Comedy လေးပါပဲ.... အနော် တတ်နိုင်သလောက်...
18K 2.5K 19
တတိယမြောက် Webtoon translation တပုဒ်ပါ မူရင်းနာမည်က 오늘도 사랑스럽개 ပာ စာရေးသူနာမည်က 이헤 ပါ ဒီ webtoon လေးရဲ့အကြောင်း အကျဉ်းချုံးပြောရမယ်ဆိုရင် ကျောင်းဆရာမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Shin HaOon ဟာ. မိသားစုကျိန်စာတစ်ခုကြောင့် ယောကျာင်္းလေးတယောက်နဲ့ နမ်းမိတာနဲ့....ညဆယ့်နှစ်နာရီကနေ မနက်ရောက်တဲ့အထိ ခွေးလေးတကောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာပါ.... အဲ့ဒီ...
Gangnam Girl (Completed)
363K 37K 113
Gangnam Girl ဒီ Fiction ဟာ Korean Webtoon တစ်ခုကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ထားတာပါ ...မူရင်း နာမည်ကMy ID is Gangnam's Beauty (내 ID는 강남미인) ပါ ငယ်ငယ်တည်းက ရုပ်ဆိုးလွန်းလုိ့ လူတိုင်းဆီမှာ ဝိုင်းလှောင်ခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်မလေးတယောက် ဟာ ဆာဂျရီ လုပ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ Drama...